Epistily katôlika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Epistily katolika)
Epistily katôlika na Epistola katôlika na Taratasy katôlika no iantsoana ireo epistily fito milahatra ao aorian'ny epistily atao hoe nosoratan'i Paoly ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly.
Ireto avy izy ireo:
ny Epistily nosoratan'i Jakoba, na Epistola nosoratan'i Jakoba;
ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera, na Epistola voalohany nosoratan'i Piera;
ny Epistily faharoa nosoratan'i Petera, na Epistola faharoa nosoratan'i Piera;
ny Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, na Epistola voalohany nosoratan'i Joany;
ny Epistily faharoa nosoratan'i Jaona, na Epistola faharoa nosoratan'i Joany;
ny Epistily fahatelo nosoratan'i Jaona na Epistola fahatelo nosoratan'i Joany, ary
ny Epistily nosoratan'i Joda,na Epistola nosoratan'i Joda.
2 Ny Epistily nosoratan' i Jakoba
3 Ny epistily nosoratan' i Petera
3.1 Ny Epistily voalohany nosoratn' i Petera
3.2 Ny Epistily faharoa nosoratan' i Petera
4 Ny epistily nosoratan' i Joany
4.1 Ny Epistily voalohany nosoratan' i Joany
4.2 Ny Epistily faharoa nosoratan' i Joany
4.3 Ny Epistily fahatelo nosoratan' i Joany
5 Ny Epistily nosoratan' i Joda
Ny hoe katôlika dia tsy hoe "momba ny mpino na ny finoana katolika", fa kosa "ho an'ny fiangonana rehetra" (fa tsy ho an'olona na fiangonana iray voatondro). Amin' ny teny grika dia atao hoe καθολικαὶ ἐπιστολαί / katholikai epistolai.
Ny Epistily nosoratan' i JakobaHanova
Ny Epistily nosoratan' i Jakoba dia boky dia voasoratra tokony ho teo anelanelan' ny taona 49 sy 132. Tamin' ny taonjato faha-2 vao nekena ho isan' ny kanonan' ny Baiboly kristiana tanteraka io taratasy io. Miantefa amin' ny "foko roa ambin' ny folon' ny vahoakan' Andriamanitra any am-pielezana" ny taratasy.
Manolotra fampianarana sy fampiharana ny fivavahana kristiana eo amin' ny fiainana andavanandro io epistily io. Entaniny ny Kristiana mba hikatsaka sy hifidy ny faharetana, izay "fahendrena avy any ambony" (Jak. 3.17), ny fanetren-tena sy ny "fivavaky ny finoana" (Jak. 5.15). Ilaina izany satria mitondra mankany amin' ny faharatsiana ny harem-be sy ny fiteny feno fireharehana ary ny fialonana sy fifampiandaniana (Jak. 3.14). Ny finoana kristiana dia ahafahan' ny Kristiana manohitra ny fakam-panahy na dia izay farany mafy aza. Tokony hosedraina tsy ankijanona anefa nefa izany finoana izany satria ny finoana tsy misy asa dia finoana maty (Jak. 2.17).
Ny epistily nosoratan' i PeteraHanova
Roa ny epistily lazaina fa nosoratan' i Petera na Piera, dia ny Epistily voalohany sy ny Epistily faharoa nosoratan' i Petera. Ny Epistily voalohany dia heverin' ny mpikaroka fa nosoratana tokony ho teo anelanelan' ny taona 64 sy 90 fa ny faharoa kosa dia tamin' ny fari-potoana eo anelanelan' ny taona 60 sy 160.
Ny Epistily voalohany nosoratn' i PeteraHanova
Miresaka ny anjara asan' i Kristy efa voalahatra rahateo, dia ny maha Mpanavotra azy (1Pet 1) ity taratasy ity. Avy eo manazava fa i Kristy no vato fehizoron' ny Fiangonana, fa ny fitambaran' ny mpino rehetra no manao ny asam-pisoronan' ny mpanjaka (izany dia fantatra amin' ny andian-tenby hoe "mpisorona ny mpino rehetra") sy firenena masina ary tantarainy koa fa nitory teny tamin' ny fanahy voafonja i Kristy (1Pet 2 sy 3). Manazava ny antony itoriana ny Filazantsara (Evanjely) amin' ny maty sy ny antony tokony hiandrasan' ny loholona ny ondry io taratasy io amin' ny farany (1Pet 4 sy 5).
Ny Epistily faharoa nosoratan' i PeteraHanova
Mananatra ny Kristiana ny mpanoratra mba hanamafy ny fiantsoana azy ireo sy ny nifidianana azy ireo; ao amin' io epistily io no ahitana ny fanambaràna mazava fa tsindrimandry (na fanilovana) avy amin' ny Fanahy Masina no nanoratana ny Soratra Masina (2Pet 1). Mampitandrina ny mpino tsy hoazon' ny fampianaran-dison' ny mpampianatra sadoka avy eo ily taratasy (2Pet 2). Amin'ny farany (2Pet 3) ny mpanoratra dia miresaka ny amin' ny andro farany; manamafy ny finoan' ny Kristiana amin' ny fiavian' i Kristy fanindroany (na parosia), izay nandrasan' izy ireo sady efa antomotra. Ambarany anefa fa tsy mitovy ny lanjan' ny fotoana araka ny hevitr' Andriamanitra sy araka ny hevitr' olombelona (2Pet. 3.8).
Ny epistily nosoratan' i JoanyHanova
Telo ny taratasy lazaina fa nosoratan' i Joany, dia ny Epistily voalohany sy ny Epistily faharoa ary ny Epistily fahatelo nosoratan' i Joany. Ireo epistily telo ireo dia heverin' ny mpikaroka fa nosoratana teo anelanelan' ny taona 90 sy 110.
Ny Epistily voalohany nosoratan' i JoanyHanova
Mampianatra ny mpanoratra mba hahatonga ny fiangonana ho mahatoky ao amin' ny finoana. Tandindomin-doza ny fiangonana amin' ny fisian' ny mpaminany sandoka (1Joa. 4.1) izay mandà ny maha avy amin' Andriamanitra an' i Jesoa Kristy tonga nofo (1Joa. 4.2). Ny fampianaran' ny antikristy (1Joa. 2.8) dia filôzôfia ara-pivavahana izay milaza fa ny fahalalana ihany no ahafaha-manakatra an' Andriamanitra (1Joa. 2.4). Manohitra ny "fanahin' ny fampiviliana" na "fanahin' ny fahadisoan-kevitra" (1Joa. 4.6) izay nampidirin' ny mpaminany sandoka ka niteraka fisarahana (1Joa. 4.3) sy tsy fifankatiavana (1Joa. 2.9; 4.20) ity taratasy ity. Nampahatsiahy ny fitiavan' Andriamanitra izay niseho tamin' ny fandefasany ny Zanany ho sorona hanadiovana ny fahotan' ny olombelona koa ny mpanoratra. Tsindrian' ny mpanoratra fa ny fifankatiavana no hitoeran' Andriamanitra amin' ny olombelona ka hahatanteraka ny fitiavany (1Joa. 4.8-12).
Ny Epistily faharoa nosoratan' i JoanyHanova
Mamerina ny hevi-dehibe voalaza ao amin' ny Epistily voalohany ny mpanoratra, dia ny didim-pitiavana, ny firaisana amin' Andriamanitra (2Joa. 1.4-9). Apiany amin' ny filazany hoe : "Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy na miarahaba azy akory". Izany olona izany dia ny "mpamitaka sy antikristy" (2Joa. 1.7), ka izay olona mampandroso azy an-trano dia "miombona amin' ny ratsy ataony" (2Joa. 1.11).
Ny Epistily fahatelo nosoratan' i JoanyHanova
Ny Epistily fahatelo nosoratan'i Joany dia nosoratana tokony ho teo anelanelan' ny taona 90 sy 110.
Nataon' ny mpanoratra ity taratasy ity noho ny fitondran-tenan' ny Kristiana iray atao hoe Diôtrefa (3Joa. 1.9) izay tsy nety nanaiky ny fahefan' ny "Loholona" (na "Antidahy") izay nampanantena ny hikarakara manokana an' i Diôtrefa (3Joa. 1.10). Midera an' i Gaio ny mpanoratra (3Joa. 1.3-7) sy mamporisika azy hanohy ny fandraisam-bahiny ary hiasa ho an' ny Fahamarinana (3Joa. 1.8).
Ny Epistily nosoratan' i JodaHanova
Ny Epistily nosoratan' i Joda dia nosoratana tokony teo anelanelan' ny taona 80 sy 100.
Ity epistily ity dia nosoratana ho an' ny Kristiana nihamalemy finoana noho ny fampianaran' ireo izay manao ny fivavahanan' ny mpanompo sampy miharo filibana ara-nofo sy milaza tena ho afaka amin' ny fanajana ny lalàn' ny fitondran-tena. Mampitandrina ny Kristiana amin' ireo izay mamadika ny fahasoavan' Andriamanitra ho filibana amin' ny alalan' ny fandavana an' i Jesoa Kristy ny mpanoratra (Joda 3-4). Manome ohatra fitsarana ao amin' ny tantaran' ny famonjena ny mpanoratra, dia ny amin' i Sôdôma sy i Gômôra, sy ny fikomian' ny Kôre. (Joda 5-16). Mamporisika ny fanehoam-pitiavana amin' ireo izay nania ny mpanoratra rehefa avy niresaka ny amin' ny fitsarana izay mampatahotra tamin' ny andro taloha sy amin' ny andro hoavy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_katôlika&oldid=1012672"
Dernière modification le 12 Jolay 2021, à 09:45
Voaova farany tamin'ny 12 Jolay 2021 amin'ny 09:45 ity pejy ity.